Antony fitsangatsanganana any Japon ary hijanonana hiaina | Vaovao momba ny dia
Antony fitsangatsanganana any Japon ary hijanonana
Carmen Guillen | | Japana, Fitsangatsanganana any Azia
Ho an'ireo avy any Espana na firenena mifanolo-bodirindrina amintsika dia mety ho somary sarotra amintsika ny manao ny diany mankany amin'ny firenena Japoney. Ny antony lehibe mahatonga an'io dia ny fananantsika zavatra tena tsara eo akaiky eo ihany koa hita fa mora kokoa noho ny akaiky azy ireo ny lojika. ny sidina mankany Japon Tsy dia mora vidy izy io, fa raha ny nofinofisinao ny hipetraka eo ambanin'ny tantara marobe any aoriany sy ny fandrosoana ara-teknolojia be dia be, eto dia hanome anao antony marobe hiafara amin'ny fanomezana anao ny farany manosika anao mila.
Ataovy ao an-tsaina ireo antony handehanana any Japon ary hijanonana velona fa ao amin'ny Actualidad Literatura dia faly izahay manome anao indray mandeha.
Nahoana isika no tokony handeha any Japon, fara fahakeliny, indray andro eo amin'ny fiainantsika?
Iray amin'ireo antony hametrahantsika azy ao aminao fitateram-bahoaka. Na dia tsy maintsy nanangana "sarety ho an'ny vehivavy" aza izy ireo tato ho ato, inona ny serivisy fitaterana (bus sy lamasinina) manara-dalàna ara-potoana ary mifanaraka tsara izy ireo mba hifindrana eo anelanelan'ny iray hafa.
Tsy misy heloka mankanesa any amin'ny manodidina anao halehanao, raha ny marina, manana izy ireo fehezan-dalàna tena raiki-tampisaka. Amin'ny maha angon-drakitra anekdotaly antsika dia holazainay fa elo izy ireo, ny halatra sarobidy indrindra amin'ny fahavaratra noho ny orana tsy miato.
ny ny sakafo. Ho fanampin'ny fananana sakafo matsiro sy mahafinaritra miaraka amin'ny fisehoana tena tsara, dia mora ihany ny misakafo any. $ 10 dia afaka mihinana mandritra ny herinandro manontolo.
La fanabeazana tsara ny olony. Ny Japoney, amin'ny fitsipika iray, dia fahalalam-pomba, mihaino ary tia olona. Ny teny ho henonao indrindra dia "misaotra" sy "azafady." Ampiasain'izy ireo izy ireo hanatanterahana saika ny hetsika rehetra mahatafiditra ny fandraisana anjaran'ny hafa. Ity antony ity, na dia mety ho toa tsotra aza, dia iray amin'ireo sarobidy indrindra rehefa mandeha, satria ny fanampian'ny mponina ao amin'ny firenena na ny tanàna manokana izay fivezivezena dia mety ho ilainay mpizahatany tokoa. Tsy isalasalana fa mahafinaritra kokoa ny voahodidin'ny olona sariaka sy mahalala fomba noho ny olona izay tsy manampy anao tsy misy antony mazava na manilika anao.
ny madio ny tanàna y milamina tanteraka ny zava-drehetra. Firenena sivika somary olom-pirenena izy io raha ny fahadiovan'ny arabe sy ny filaminany no jerena. Ity tsiro amin'ny fahadiovana sy filaminana ity dia ampianarina hatramin'ny mbola kely any am-pianarana. Raha ny marina, misy ny fitsipika sy ny protokol amin'ny zavatra rehetra. Izany dia vokatry ny habetsahan'ny olona mipetraka ao Japon. Noho io antony io dia tsy maintsy alamina tsara sy refesina ny zava-drehetra, toy ny nitranga tamin'ny teboka voalohany niresahanay momba ny synchrony lehibe eo amin'ireo bus sy lamasinina samihafa.
Any Japon Misy zavatra azo atao foana. Fahantrana, tsy misy monotony. Rehefa mandeha any ianao dia ho tsapanao fa eo anelanelan'ny teatra, fety, tranombakoka ary fialamboly hafa, ny fotoananao dia ho mankaleo.
Raha fomba iray ihany ny dia ataonao ary manapa-kevitra ny hijanona mandritra ny fotoana fohy ianao hiaina noho ny antony miasa, dia tokony ho fantatrao izany afaka matory any am-piasana ianao. Ny tena marina dia ho an'ny Tandrefana, tsy antony tsara io na farafaharatsiny, tsy zavatra tokony hankalazana izany, fa eo no heverina ho mariky ny ezaka sy ny fanoloran-tena avy amin'ny mpiasa ho an'ny orinasa.
Mahafinaritra ny kolontsainy. Amin'ny lafiny iray ianao dia afaka mitsidika sy misaintsaina ny tantara izay tazomin'ny tempoliny masina ary amin'ny lafiny iray, dia afaka mankafy ny fandrosoana ara-teknolojia lehibe misy ao amin'ny firenena ianao.
Tsy mila miteny Japoney ianao voatery mandeha amin'ny fomba fialan-tsasatra na hijanona vanim-potoana iray any. Betsaka ny famantarana sy ny famantarana ho an'ny vahiny sy ny mpizahatany amin'ny fiteny iraisam-pirenena (Anglisy) ary amin'ny fahalalana teny tsotra fotsiny amin'ny teny japoney dia afaka miaina tsy misy olana ianao.
Paraíso 'geek': Raha tianao ny manga, ny maherifo na ny tontolon'ny Pokemon dia tonga tany amin'ny firenena mety ianao mba hahafantatra tsara an'ity tontolo iray manontolo ity. Raha ny tena izy dia fantatra fa mpizahatany maro izay midina any amin'ny firenena Japoney no tena mikaroha lalina kokoa amin'ity tontolo ity izay misy ny reharehan'ny geek.
Na inona na inona antony, raha midina any Japon ianao dia gaga amin'izay rehetra atolotry ity firenena taloha ity. Mety ho iray amin'ireo traikefa fitetezana mahagaga sy hafa indrindra ho vitanao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fitsangatsanganana any Azia » Antony fitsangatsanganana any Japon ary hijanonana
Firenena mendrika ho fantatra, na dia herinandro tokana aza ny fijanonana. Mila visa ho an'ny mpizahatany ve ianao?
Fitsangatsanganana an-tsambo 8 andro ao amin'ny MSC Splendida manomboka amin'ny 649 euro